पतिले बिहे पछि प्रेमिका राखे, श्रीमतिले म पनि अर्को बिहे गर्छु! भन्दा यस्तो के गरे? – Dailny NpNews
पतिले बिहे पछि प्रेमिका राखे, श्रीमतिले म पनि अर्को बिहे गर्छु! भन्दा यस्तो के गरे?
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ०३, २०७८ समय: २१:१०:१७
पत्नीको ज्यान लिएर शवलाई भुइँमा ब्यवस्थापन गरेर फरार पति र उनकी दोस्रो पत्नीलाई अन्तत सदर प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सदर प्रहरी चौकी अधिकारी रतन सिंहले भने कि दुवै आरोपीलाई मध्य भारत प्रदेशको इन्दौर शहरबाट पक्राउ गरिएको छ । पतिले दोस्रो पटक विवाह गरेको प्रहरीले खुलासा गरेको छ । पहिलो श्रीमतीले ध म्की दिइन् कि उनले पनि अर्को विवाह गर्नेछिन् र उनीसँग पति रिसाए र उनलाई सन्सारबाटै बिदा गरिदिए ।
सदर प्रहरी चौकी अधिकारी रतन सिंहले बताए कि ललिता नाम गरेकी एउटी महिलाको शव उनको घरमा लिम्थान गाउँको केही पर रहेको ठाउँमा जमिनमा गा डि ए को थियो । यसको रिपोर्ट ललिताकी छोरीले दर्ता गरेकी थिइन् । म ृत क का पति कांजी र उनकी सौतेनी आमा मनीषा दुवै घटनास्थलबाट भा गे का थिए । त्यस बेलादेखि दुबै आरोपीको खोजी भइरहेको थियो ।
सोमबार प्रहरीले दुबैलाई मध्य प्रदेशको इन्दौरबाट पक्राउ गर्याे । दुबै त्यहाँ काम गर्थे । पुलिसले मनिषाकी पति काञ्जी र उनकी दोस्रो पत्नी मनीषालाई अदालतमा पेश गर्ने छ । प्रहरीको प्रारम्भीक अनुसन्धानमा श्रीमतीले दोस्रो विवाह पनि गर्ने कुरा गरेको सुनेर रिसाएका पतिले दोश्री श्रीमति सहित यस्तो घटना गराए ।
पुलिसले जनाएको छ कि आरोपी कान्जीले एक बर्ष अघि नाट्रा प्रणालीबाट आदिवासी परम्परा अनुसार दोश्रो विवाह गरेका थिए । त्यसबेलादेखि पहिलो पत्नी ललिता माइत बस्न थालिन् । घटना हुनुभन्दा केही दिन अघि उनीँ पतिको घर फर्किइन् । त्यस्तै अवस्थामा जब पतिले उनलाई अब माइत नजान आग्रह गरे, तब रिसाएकी ललिताले आफ्ना पतिलाई भनिन् की म पनि फेरि नाट्रा प्रणाली मार्फत अर्कैसँग विवाह गर्छु । यो सुनेर रिसाएका काञ्जी र उनकी दोस्रो पत्नी मनीषाले कु ट पि ट गरे ।